China Aluzinc Steel eriri igwe, Prepainted Steel eriri igwe, Steel Roofing mpempe akwụkwọ - Witop Steel
Home > Ngwaahịa
Prime Hot Itinye Galvanized Steel Coil
A na-eji eriri nchara kpaliri kpaliri ọkụ site na ntinye ọkụ na-aga n'ihu site na eriri igwe nchara oyi. Ihe mkpuchi zinc n'akụkụ abụọ nwere ike igbochi nchara na nchara, ma nwekwuo ndụ ọrụ nke efere efere.
G550 Galiri Galvalume Steel Coil
G550 Hot Dipped Galvalume Steel Coil bụ alloy nke nwere 55% Aluminom, 43.5% Zinc, 1.5% Silicon.
G550 Hot Dipped Galvalume Steel Coil bụ ngwaahịa igwe anaghị agba nchara nke na-egosipụta nkwụsi ike mgbochi nchara na mgbochi nchara na ule dị iche iche nke acid na alkaline, iru mmiri na mmiri ozuzo.
Hot tinye Galvanized corrugated roofing mpempe akwụkwọ
Dị ka onye nrụpụta mpempe akwụkwọ kpuchiri ihe na -ekpo ọkụ kpaliri ọkụ, Witop Steel na -agbaso ụkpụrụ ịdị mma siri ike iji mepụta mpempe akwụkwọ ahụ. Anyị na -ekwe nkwa na mpempe akwụkwọ ụlọ anyị kpaliri na -emezu ihe ndị ahịa chọrọ.
0.18MM Oké Galvalume Corrugated Roofing Sheet
Dị ka onye nrụpụta 0.18MM Oké Galvalume Corrugated Roofing Sheet, Witop Steel na -agbaso ụkpụrụ ịdị mma iji mepụta mpempe akwụkwọ. Anyị na -ekwe nkwa na mpempe akwụkwọ mkpuchi ụlọ galvalume na -emezu ihe ndị ahịa chọrọ.
AZ100 AZ150 Coval Galvalume PPGL steel coil
AZ100 AZ150 Preparated Galvalume PPGL Steel Coil nwere ihe osise eserese ya iji kpuchie ma chekwaa nchara ahụ ka ọ ghara ịta nchara, na mgbakwunye na mkpuchi mkpuchi ihe mkpuchi alu-zinc. Ndụ ọrụ dị ihe dị ka ugboro 1.5 ogologo karịa nke galvalume coil.